‘सेतो छडीवाली’ प्रेरणादायी आश्मा | Aaja ko Shiksha
‘सेतो छडीवाली’ प्रेरणादायी आश्मा
एक महिनाभन्दा केही बढी नै भयो होला । फेसबुकमा एकजना Ma Dibya भन्ने छोरी मान्छेको रिक्वेस्ट आयो । सर्सर्ती प्रोफाइल हेरेँ र ठीकै लागेर कन्फर्म गरेँ । त्यसपछि मेसेन्जरमा मैले आफ्नो परिचय दिएँ । उहाँले पनि परिचय दिनुभयो । कहिलेकाहीँ छोटो कुराकानी पनि हुन थाल्यो । फोनमा पनि बातचीत भयो । उहाँले सामाजिक सेवा आफ्नो रुचि भएको बताउनुभयो । जडीबुटी भन्ने ठाउँमा उहाँको आफ्नै सङ्गीत विद्यालय भएको पनि थाहा भयो । बेलाबेलामा उहाँका पोस्टहरू पनि हेरियो । त्यहाँ कहिले साहित्यिक कार्यक्रममा सहभागी भएका र कहिले फरक क्षमताका बालबालिकासँग रमाइरहेका गतिविधिहरू देख्न पाइन्थ्यो । मेसेन्जरमा उहाँले एउटा लिङ्क पनि पठाउनुभएको थियो । गाउँमा नेट कमजोर भएको हुँदा त्यो खोलेर हेर्नचाहिँ सकिएन । उहाँले दशैंको समय, तिनै बालबालिकासँग बिताएको तस्बिर पनि हेर्न पाइयो ।
यत्तिका भइसकेपछि मैले उहाँलाई साह्रै सक्रिय र असल मान्छे ठानेँ । उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाभाव पनि जाग्यो । अनि के मन लागेर हो, एकदिन उहाँको एउटा तस्बिर अपलोड गरी ‘उहाँको अनुहारमात्र राम्रो होइन, विचार, भावना, व्यवहार र योजना पनि अनुकरणीय छन्’ लेखेर पोस्ट गरेँ । त्यसपछि त्यो तस्बिरका बारेमा धेरैको जिज्ञासापूर्ण कमेन्ट आयो । मैले उत्तरमा लेखेँ, ‘मान्छे त म पनि राम्ररी चिन्दिनँ । तर उहाँका कामहरू भने मलाई ज्यादै मन पर्छन् ।’
हो, मलाई उहाँको काम मन परेर भेट्न हतार लागेको थियो । उपत्यका गएको बेला मेरो बसाइ भक्तपुर हुने भएकोले जडीबुटी नजिक पनि पर्थ्यो । यो कुरा उहाँलाई बताउँदा उहाँले पनि सजिलै स्वीकृति दिनुभयो ।
कात्तिक ३ गते उपत्यका आएँ । अनि भोलिपल्ट होला, मेसेन्जरमा भनेँ, ‘मिस, भक्तपुरबाट नमस्कार !’ त्यसको भोलिपल्ट उहाँको फोन आयो । नम्बर सेभ नगरेको हुँदा उहाँले नै भन्नुभयो, ‘म आश्मा हो सर ! हामी फेसबुकमा कुरा गरिरहन्थ्यौं नि ! तपाइँ कहिले आउने त यता ?’ मैले जानिराखेको भन्दा फरक नाम आएको हुँदा म थोरै अलमलिएँ । तर साहित्यकारहरूले राख्ने गरेको उपनाम सम्झेर सामान्य ठानेँ । पछि थाहा भयो, उहाँको खास नाम आश्मा अर्याल र ‘मा दिव्या’चाहिँ ओशोको ध्यानमा जाँदा गुरुहरूले राखिदिएको नाम रहेछ ।
मैले ‘फोन गरेर आउँछु’ भनेँ । बिहीबार काठमाडौंतिर जाँदा, ‘फुर्सद भए यता पसेर जानुहोला’ भन्दै हुनुहुन्थ्यो । जाँदा जानैको हतार भयो । आउँदा पनि अबेला भयो । त्यतिखेर उहाँको स्कूलै बिदा भइसकेको थियो होला । ढिला भयो । अनि ८ गते शुक्रबार फोन गर्दा उहाँले ‘आज दिनभरी मलाई फुर्सदै छ, आउनूस्’ भन्नुभयो ।
बिहानको खाना खाएर हामी बाबुछोरा उहाँले भनेबमोजिम जडीबुटीको कामख्या पेट्रोल पम्पनजिकै पुग्दा बिहानको ११.०० बजेको थियो । फोन गर्यौं । एकैछिनमा एकजना भाई हामीलाई लिन आउनुभयो । सडकनजिकैको घर । दुईतला भर्याङ उक्लिनासाथ पूर्वोत्तर फर्केको एउटा ठूलो कोठा आयो । चश्मा लाउनुभएकी एउटी पातली शरीरकी नानी–तस्बिरमा मैले देखेकै थिएँ–ढोकासम्म आउनुभयो । भन्नुभयो, ‘सरलाई ल्यायौ त ?’
हामीलाई ल्याउने भाईले ‘ल्याएँ’ भन्नासाथ मैले पनि, ‘हामी आइपुग्यौं मिस, आउन सजिलै रहेछ’ भनेँ ।
‘हामी भन्नाले को–को सर !’ उहाँको प्रश्न थियो ।
‘हामी बाबुछोरा हौं’ भन्दै भित्र पस्यौं ।
कोठामा सामान्य कार्पेट र चकटी ओछ्याइएको थियो । कोठाभरी विभिन्न बाजाहरू (हारमोनियम, तानपुरा, तबला) थिए । किताबको सानो र्याक पनि थियो । उहाँले, ‘चकटी ओछ्याएर बसौँन सर !’ भन्नुभयो ।
हामीलाई लिन जाने भाई भने बिदा भएर हिँड्नुभयो ।
कुराकानी गर्दै जाँदा उहाँको हेराइ अलि कस्तो–कस्तो लाग्यो । अनि मैले उहाँलाई, ‘मिस, तपाइँ आँखा अलि कम देख्नुहुन्छ हो ?’ भनेर सोधेँ ।
अनि उहाँले, ‘हो त सर, म सेतो छडीवाला हुँ नि !’ भन्नुभयो ।
एकाएक उहाँको त्यस्तो उत्तर सुनेपछि मलाई किन–किन, उहाँका खुट्टामा बारम्बार ढोगौंजस्तो लाग्यो । त्यस्तो अवस्थाकी मान्छेको पनि कति सक्रियता ! कति परमार्थी भावना ! यस्तै सम्झेर त्यस्तै केही सोध्न खोज्दै थिएँ । भरे त उहाँले नै उतिखेरै भन्नुभयो, ‘धेरैले मलाई यस्तो आँखा नदेख्ने मान्छेको पनि कस्तो लगनशीलता र क्षमता भनेर आश्चर्य प्रकट गर्छन् । आँखा नदेख्नु र ममा क्षमता हुनुको के सम्बन्ध ? भन्नु त सर !’
उहाँको कुराले ममा नयाँ ज्ञानको बिजुली चम्क्यो र मेरो सम्भावित प्रश्नमा पनि टम्म बुजो लाग्यो ।
कोठाभरी थरीथरीका बाजा देखेर अनुप (छोरा)लाई रमाइलो लागेछ क्यार ! ‘एकपटक यो हारमोनियम बजाउनू न, ’ भन्यो ।
उहाँले पनि झर्को नमानीकन आफ्नो स्वर नभएको बताउँदै, हारमोनियममा सानासाना औंला चलाएर खोई कुन हो सुमधुर राग सुनाउनुभयो । यो विद्यालय खोल्नुअघि उहाँले नौ वर्ष सङ्गीत सिक्नुभएको रहेछ ।
तिहार आएकोले उहाँको विद्यालय पनि आजदेखि तीन दिनका लागि बिदा हुने रहेछ । अब मंगलबार मात्र खुल्नेगरी । हामीलाई लिन आउने एकजना भाई पनि भर्खरै गएपछि अब कोठा सुनसान थियो । मैले सोचेँ, विद्यालय बन्द गरेर उहाँ पनि घर जाने सोंचमा हुनुहुन्थ्यो होला । म आउने भएकाले यतिखेरसम्म पर्खेर बस्नुपर्यो !
दुई वर्ष सङ्गीत शिक्षकको रूपमा अन्यत्रै काम गरेपछि यो झङ्कार कला केन्द्र उहाँले नै स्थापना गरेको चाहिँ एक वर्ष भएको रहेछ । यस कला केन्द्रमा जम्मा १६ जना विद्यार्थी रहेछन् । गुरु–आमा आफू २१ वर्षकी र विद्याथीचाहिँ पाकापाका उमेरका पनि छन् रे ! तीमध्ये केहीलाई उहाँ निःशुल्क सिकाउनुहुँदो रहेछ ।
कुराहरू सिलसिलाबद्ध रूपमा भएनन् । यसो भनौं, म जानकारी लिनका लागि गएकै थिइनँ । गए पनि तयारीविनै गएको थिएँ । जथाभावी र कुनै अनावश्यक प्रश्न सोधेँ कि जस्तो पनि लाग्छ । तर जे सोधेँ, उहाँले बडो शालीन ढङ्गले बताउनुभयो ।
२०५५ साल वैशाखमा जन्मिनुभएकी आश्माको घर ललितपुरको रानीबु भन्ने ठाउँमा रहेछ । गाडीबाट ओर्लेर पनि १५ मिनेट हिँड्नुपर्ने । जन्मजात ‘लो भिजन’ । छोरीको त्यस्तो अवस्थाका बारेमा आमालाई तीन महिनामा थाहा भएको रे ! सानैदेखि पढाइमा अब्बल । सधैं फस्ट हुने । ‘च्यालेन्जिङ सिच्युएशन’ व्यहोरेर पनि पहिलेदेखि अहिलेसम्म (मूल विषयमा मानविकी स्नातक सकेर अहिले स्नातकोत्तरको तयारीमा) कलेजमा समेत टपर ।
साहित्यसँग सम्बन्धित अतिरिक्त क्रियाकलापमा सधैं पुरस्कृत हुनुभएकी । कक्षा पाँचमा पढ्दा मनकामना दर्शन गरेको अनुभव पत्रिकामा छापिएपछि लेखनमा हौसला । सात कक्षा पढ्दा नै कवितासङ्ग्रह र नौमा पढ्दा कथासङ्ग्रह प्रकाशित । ती दुबै पुस्तकहरू राष्ट्रिय स्तरमा चर्चित भएर पुरस्कृत भएका । ध्यान गुरुप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै लेखिएको पुस्तक ‘नमेटिने डोबहरू’ पनि प्रकाशित । विवाहित महिलाको पीडालाई विषयवस्तु बनाएर लेखिँदै गरेको उहाँको उपन्यास प्रकाशोन्मुख अवस्थामा । अनुरोध स्वीकार गरेर नोबेल साकोस साहित्यिक संस्थाको आजीवन सदस्य बन्नुभएकी ।
साहित्यकारका अतिरिक्त आश्मा सफल सङ्गीतकार पनि हुनुहुन्छ । उहाँले, महेश पौडेलद्वारा रचित ‘मलमल बादलको परिधान लाऊ’ भन्ने गीतलाई आफ्नै विद्यार्थीबाट पैसा उठाई उनीहरूलाई नै गाउन लगाएर र आफैंले सङ्गीतबद्ध गरेर रेडियो नेपालबाट लाइभ रेकर्ड गराउनुभएको छ । उहाँले डकुमेन्ट्री पनि बनाउनुभएको छ ।
समाजसेवा उहाँको एउटा विशेष पाटो हो । उहाँले फरक क्षमताका विद्यार्थीका लागि शिविर सञ्चालन गर्नुभएको छ ।
६ वर्षसम्म टेलिभिजनमा कार्यक्रम चलाउनुभएकी आश्मा विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रमको संयोजकको भूमिका निर्वाह गर्न पनि रुचाउनुहुन्छ । उहाँले Slam Poetry and Spoken Word Poetry भन्ने परियोजनामा दुई वर्षसम्म सहभागी भएर प्रशिक्षण लिनुभएको थियो । अहिले उहाँले झङ्कार कला केन्द्र र साहित्य सङ्गालो भन्ने दुईवटा युटुव च्यानल चलाउने गर्नुभएको छ । तिनमा उहाँका सङ्गीत र साहित्यिक गतिविधिहरू सुनेर/हेरेर आनन्द लिन सकिन्छ । उद्घोषण तालिम दिन कुशल आश्मालाई उत्प्रेरणा कक्षा (Motivation Class) लिनका लागि पनि धेरैले निमन्त्रणा गर्ने गरेका छन् ।
दशैंमा खसी काटिएको स्मृतिबाट प्राणीप्रति असीम माया र मासुप्रति घृणा भई गुरुबाट मन्त्र लिएर मासु खान छोड्नुभएकी आश्मा ओशोको ध्यान गर्नुहुन्छ । यसैले आफ्नो जीवन तनावरहित बनाएको उहाँको भनाइ छ ।
कुराकानी हुँदै गर्दा उहाँले, ‘सरलाई फुर्सद भए म हजूरको अन्तर्वार्ता लिन्छु’ भन्नुभयो । त्यसका लागि उहाँले तीनकुनेको एउटा क्याफेमा जान आग्रह गर्नुभयो । उहाँलाई त्यहाँसम्म छोराले पुर्याउने भयो । म हिँड्दै जाँदा आश्मा एउटा घरको ढोकाबाहिर हुनुहुन्थ्यो । उहाँले, ‘भित्र जाऊँ सर !’ भनेपछि भित्र जाँदै गर्दा उहाँले ढोका छाम्दै भन्नुभयो, ‘सर, हामी कहाँ आयौं ? बोर्ड पढ्नू त ! यो त होइन ।’ म छक्क परेँ । म अर्कै ढोकाबाट छिर्र्न खोजेको रहेछु । बोर्ड पढेर हामी भित्र छिरेपछि उहाँले नै पो, ‘हो, योचाहिँ हो । दाहिनेपट्टि भर्याङ छ । अनि तल अगाडि कोठा छ । हामीलाई अन्तर्वार्ता रेकर्ड गर्न त्यहीं उपयुक्त हुन्छ,’ भन्नुभयो । हामी त्यहीं गएर चिया पकौडा खाँदै उहाँको साहित्य सङ्गालो च्यानलका लागि अन्तर्वार्ता रेकर्ड गर्न थाल्यौं ।
अन्तर्वार्ता सिध्याएपछि छोराले उहाँलाई फेरि उहाँकै विद्यालय जडीबुटीसम्म ल्याइदियो र हामी बाबुछोरा भेट भएर फर्क्यौं ।
तिहार आएपनि मलाई अब त्यतापट्टि कुनै ध्यानै थिएन । झिलिमिली बत्तीको रूपमा मनभरि आश्माकै विचार र कामको सम्झना भइरहेको थियो । उहाँका च्यानलहरू हेरेर, कुराहरू सुनेर आनन्द लिइरहेको थिएँ । तिहार सकिनासाथ म फेरि (श्रीमती कमलासहित) उहाँको कार्यकक्षमा गएर यति कुरासँगै थप जिज्ञासाहरू पनि राखें :
तपाइँको लेखनको मूल उद्देश्य के रहन्छ ?
–आख्यान भए म त्यसमा पाठकले बुझ्न सक्ने सरलता चाहन्छु । कविता भए त्यसमा नयाँ विम्बका साथ भावनामा डुब्न चाहन्छु । पढ्दा पाठककले आफ्नै कथा हो भन्ने ठान्नुपर्यो ।
तपाइँको चर्चा कत्तिको भएको छ ?
–धेरै भएको छ । सबैजसो पत्रपत्रिकाहरूले मेरो बारेमा लेखेका छन् । रेडियोमा बोलेकी छु । टिभीमा अन्तर्वार्ता दिएकी छु । धेरैजना साहित्यकारहरूसँग मेरो चिनजान छ । अझै मेरो चर्चा हुँदैछ ।
तपाइँका कुनै अवस्मिरणीय क्षण भए बताइदिनूस् न !
–अविस्मरणीय क्षण भन्ने कुरा कुनै दुःख र सुखबाट उत्पन्न हुने कुरा हो । अति दुःखी र अति उत्तेजित हुँदा त्यसको अनुभव हुन्छ । तर मलाई त्यस्तो अनुभूति नै हुँदैन । त्यसैले मेरा लागि कुनै त्यस्तो क्षण छैन । म हरेक कुरालाई सहज भावले लिने गर्छु ।
तपाइँलाई कसैले सहयोग गर्न चाह्यो भने त्यो लिनुहुन्छ ?
–मैले सकेको र मेरो क्षमताले भ्याएको काम म कतिपय अवस्थामा स्वयंसेवकको रूपमा पनि गर्छु । तर जति काम म गरिरहेकी छु र गर्ने विचार छ, ती मेरा लागि नभएर, यही समाजका अरूका लागि भएको हुँदा मलाई सहयोगको खाँचो छ । त्यस्ता हातहरू भए म स्वीकार्छु ।
तपाइँका भावी योजना केही छन् कि !
–मलाई एउटा कलाको विद्यालय खोल्ने इच्छा छ, जहाँ फरक क्षमता भएका बालबालिकाले विज्ञान, कला र अध्यात्मका बारेमा एकै ठाउँमा सिक्न पाऊन् । यो मैले देखेको सपना हो । मैले पूरा गर्न सकिनँ भने कसै न कसैले गर्छ ।
धन्य आश्मा ! तपाईँबाट आजको पुस्ताले धेरै प्रेरणा पाउन सक्छ । तपाईँका भावी योजना र सपना हाम्रा पनि हुन् ।